4 yekuwedzera kweMozilla Firefox kuchengetedza zvakavanzika zvedu | Linux Vakapindwa muropa
4 yekuwedzera kweMozilla Firefox kuchengetedza kwedu zvakavanzika
Vazhinji vashandisi vanoramba vachishandisa Mozilla Firefox, ingave ESR vhezheni kana yazvino vhezheni. Chero zvazvingaitika vazhinji vashandisi vanoshandisa Firefox sosi yayo yakavhurika uye yekupa chengetedzo huru inopesana nemakomba ekuchengetedza uye neyakavanzika yainopa pamusoro pemamwe mabhurawuza ewebhu akadai seChannel kana Opera.
Asi kuvanzika kunopihwa neMozilla Firefox kunogona kuvandudzwa. Izvi ndezvekuwedzera kune zvinowedzerwa kana mawedzero-atinogona kuwedzera kune webhu browser. Tevere isu tichataura nezvazvo mawedzero mana atinogona kuwedzera kuMozilla Firefox uye izvo zvinoita kuti kubhurawuza nedata redu rive rakachengeteka kana zvichibvira.
1 1.DuckDuckGo Yakavanzika Zvakakosha
2 2. Chakavanzika Badger
3 3. HTTPS Kwese Kwese
4 4. NoScript Security Suite
1.DuckDuckGo Yakavanzika Zvakakosha
Iyo inozivikanwa webhu yekutsvaga injini DuckDuckGo kwete chete nezve kuchengetedzeka uye zvakavanzika asi zvakagadzira kuwedzerwa nemidziyo ichatibatsira kuchengetedza kuvanzika kwedu. Kunze kwekuisa browser yayo seyakajairwa kuwedzera zvakavanzika, ichi chiwedzero chinowedzera pop-up blocker uye chiyero chemapeji ewebhu anotibatsira kuziva kana iwe uchichengetedza zvakavanzika zvedu kana zvinopesana haina kuchengeteka senge Facebook.
2. Chakavanzika Badger
Privacy Badger es kuwedzera zvakafanana nezviri pamusoro asi pamwe zvishoma zvakakwana kupfuura DuckDuckGo Yakavanzika Zvakakosha. Iye zvino yako shambadziro uye pop-up blocker ine simba kwazvo uye haina rusarura sezvo vamwe vanovharira vachitendera kupindira kweimwe kushambadza kunovigira mari. Mune ino kesi, Yakavanzika Badger ndeyesangano risiri-purofiti uye nekudaro haina kutsamira pane chero dema kana chena runyorwa.
3. HTTPS Kwese Kwese
Kunyangwe Mozilla Firefox ichiziva nekugadzirisa hunyanzvi hweHttps zvakanyatsonaka, ichokwadi kuti parizvino mapeji mazhinji haana kuitiswa zvakanaka kana kuti zvinoitika kuti mapeji ane https anonongedzera kumapeji asina kuchengeteka kana pasina protocol. Iyo https kwese kuwedzera ane hanya nezvese izvi mamiriro uye anotibatsira isu kufamba kwese kuri pasi peiyi protocol uye nekuwedzera zvakavanzika zve data redu.
4. NoScript Security Suite
NoScript Security Suite ndiko kuwedzera kunovhara zvese zvewebhu zvimwe kunze kwe html uye css. Chidimbu chewebhu shit, vazhinji venyu muchati, zvirokwazvo, asi NoScript Security Suite haidzvinyiriri Pane kudaro, inozvivhara uyezve inotibvumidza kuvhurira zvirimo zvatinoda kana kuda kuona. Izvi zvinobatsira nekuti zvinotibatsira kugadzira runyorwa nezvatinotendera uye runyorwa nerusina kutenderwa. Kuwedzeredzwa kunobatsira kunyangwe kuchida ruzivo rwemberi kwazvo kushanda.
Chokwadi ndechekuti kwete. Kune akawanda maturusi uye zviwedzero zvinotibatsira kuvandudza zvakavanzika zve data redu. Asi zvese zvinoenderana nenguva zhinji pamaitiro emushandisi, kugona kuchinja kuwedzeredza kana maturusi evamwe kuti vajairane nekushanda kwayo. Chero zvazvingaitika, kuvanzika hachisi chinhu chinofanira kuiswa parutivi sezvo tingave nematambudziko emangwana Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » 4 yekuwedzera kweMozilla Firefox kuchengetedza kwedu zvakavanzika
Kubatana 2018.2 injini yemifananidzo yave kuwanikwa nerutsigiro rweVulkan